Ukukhuluma ngezixhumanisi ezine eziyisisekelo zokufakwa okulungile kwamabhodi we-LED angaphandle
Amabhodi we-LED angaphandle anezinzuzo zokuzinza okuhle, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, nobubanzi bemisebe ebanzi. Bangumkhiqizo ofanele kakhulu wokusatshalaliswa kolwazi lwangaphandle. Ngokuyisisekelo, izikrini ezijwayelekile zokubonisa ze-LED zifaka phakathi izikrini zokukhangisa, izikrini zombhalo, izikrini zemifanekiso, njll.
Izinkinga zesakhiwo nezixazululo zesitifiketi se-UL samalambu e-filament e-LED
Muva nje, izibani ze-filament ze-LED zithandwa kakhulu, ngomthombo okhanyayo we-360 ° okhanyayo; i-high-voltage drive edidiyelwe yokukhulisa amandla kagesi nokunciphisa izindleko zesibani; umthombo wokukhanya osezingeni eliphakeme, umbala wokunikeza umbala ngaphezu kwe-90, ukusebenza okukhanyayo ngaphezulu ...
Ukuthuthukiswa kwe-LED Eminyakeni Yamuva
Eminyakeni yamuva nje, ukukhuphuka kwamalambu we-semiconductor kudonse ukunakekela okukhulu emkhakheni wokukhanyisa. Maphakathi nawo-1990, uNakamura wenkampani yamakhemikhali yaseJapan nabanye benza imizamo engapheli yokwenza i-diode light emitting diode ...